Aas Qaran Oo Loo Sameeyay Allah ha U Naxariistee Marxuum Cawke - Cakaara News
Aas Qaran Oo Loo Sameeyay Allah ha U Naxariistee Marxuum Cawke
Wajaale(CN) Talaado, 17ka Nov. 2015, Allah ha u naxariistee marxuum Axmed Xasan Cawke oo xalay niskii danbe ku geeriyooday xarunta DDSI ee magaalada jigjiga ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Tog-wajaale ee degmada Awbare oo uu marxuumku kasoo jeeday.
Aaskan qaran ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas'uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu horkacayo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, mas'uuliyiin kasocotay Somaliland oo uu hogaaminayay madaxwayne kuxigeenka, shacabwaynaha DDSI, shacab kasocday somaliland iyo shacabka magaalada wajaale intaba.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo saxaafada kulahadlay goobtaa ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ugu horayn qoyskii iyo qaraabadii uu kageeriyooday allah ha u naxariistee marxuunku. wuxuuna ilaahay uga baryay in uu janadii fardawsa kawaraabiyo. Eheladii, qaraabadii iyo dhamaan shacabwaynaha soomaalida ee uu kageeriyoodayna samir iyo iimaan kasiiyo. Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu utacsiyeeyay shacabka DDSI, shacabka soomaali land iyo shacabka qurbahaba. Wuxuuna kutilmaamay allah ha u naxariistee in marxuum cawke uu ahaa shaqsi akhlaaq wanaagsan, codkar ah islamarkaana bulshada soomaalidu meel kasta oo ay joogto ay aad u xiisayso isagoo madaxwaynuhu sheegay in marxuumku maanta kabaxay geeska Africa oo dhan.
Waxaa si taa lamid ah ugu tacsiyeeyay marxuumka mas'uuliyiintii kasocotay somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, Wariye Axmed Xasan Cawke ayaa intuu ifka kunoolaa ahaa nin magac wayn kuleh soomaalida islamarkaana kamid ahaa wariye yaasha aad ka looga yaqaano meel kasta oo ay soomaali joogto.
Markii ugu horaysay ee uu bilaabay wariyenimada wuxuu kabilaabay Radio Muqdisho 1972 GC isagoo aad ugu soo caan baxay wararka iyo gaar ahaan tebinta ciyaaraha iyo madadaalada.
Wuxuu ka soo shaqeeyay Telefishinkii dawladii hore ee soomaaliya. kadibna wuxuu noqday Afhayeenkii Madaxweynihii Kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre ilaa burburkii soomaaliya.
Cawke wuxuu ku biiray laanta Afka soomaaliga ee idaacada BBCda taariikhdu markay ahayd 1996GC. waxaa kale oo uu ka soo shaqeeyay laanta Afka soomaaliga ee VOA , Telifishanka Universal, HCTV iyo Telifishinka Somaliland oo uu hada kashaqaynayay.
Allah ha u naxariistee, marxuumka ayaa ifka kaga tagay 7 caruur ah iyo 1 xaas.
ugudanbayna, shaqaalaha shabakada Cakaaranews.com ayaa tacsi qiiro naxdineed leh halkan uga diraya dhamaan eheladii iyo qaraabadii uu marxuum Axmed Xasan Cawke kabaxay.